धोकेबाज प्रचण्ड भन्दा मेरा लागि केपी ओली नै ठीक – देउवा – Tufan Media News
१९ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०९:३०
म मेरै क्रेडिबिलिटी खत्तम पार्नेहरुसँग कसरी जान्छु ? हुँदैन, जान्नँ…’ स्वभावतः लाभका मामिलामा ‘चाहिएन’, ‘हुँदैन’, ‘पर्दैन’ नभन्ने नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आज एकाएक किन त्यसो भन्नेमा पुगे होलान् ?
११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटन बदर गरेपछि नयाँ सरकार गठन, सत्ता समीकरणका अभ्यासलाई लिएर उनीसँग विभिन्न व्यक्ति, दल र समूहका परामर्श चलिरहेका छन् । सत्तारुढ नेकपा विभाजित भइरहेको स्थितिमा देउवामाथि आँखा लगाउने एउटा समूहसँग उनले भनेका छन्, माधव–प्रचण्डभन्दा मेरा लागि केपी ओली नै ठीक । यसो भन्नुका पछाडि तर्क छ– एमसिसीसँग जोडिएको ।
नत्र, पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीजस्तो अफर पाउँदा शेरबहादुर ‘जान्नँ’, ‘खान्नँ’ भन्ने स्वभावको मान्छे नै होइन । तर, एमसिसी पारित नहुँदा उनको मन कति पो लेको रहेछ भन्ने यो अभिव्यक्तिले पनि जनाउँछ । तर जसलाई जे जवाफ दिए पनि अब सदनमा पेश हुने प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा आगामी प्रधानमन्त्रीका रुपमा वैकल्पिक नामचाहिँ शेरबहादुरको हुनैपर्छ ।
यदि उनले प्रधानमन्त्री बन्न माने भने पुरानो प्रस्तावमा उनकै नाम मुख्य बनेर जान्छ, नभए पनि वैकल्पिकमा त जान्छ–जान्छ । यदि, मुख्य व्यक्तिका रुपमा उनी अगाडि सारिए भने त अर्को प्रधानमन्त्रीको कल्पना नै हुँदैन ।
नेविसंघ सिटिइभीटी कालिकोटको जिल्ला
माधव नेपालको विरोधमा ओलीनिकट
प्रचण्डलाई किन बढ्यो खत’रा
गुगलमा ‘फटाहा’ सर्च गर्दा
देउवालाई भोट हाल्न हेलिकप्टर